Shirka Farmaajo iyo madaxda maamulada muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore? - Caasimada Online
Home Warar Shirka Farmaajo iyo madaxda maamulada muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore?
Shirka Farmaajo iyo madaxda maamulada muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulamo gaar gaar ah iyo mid wadajir ah la qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.
Kulamadaasi oo ahaa kuwii ugu horeeyay oo ay wada yeeshaan madaxweynaha dalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Madaxda dowladda Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada ayaa sanadkaan ka wada hadlaya sidii loo xoojin lahaa iska garab istaagida abaaraha ka jira ka jira dalka Soomaaliya iyo sida loo wada shaqeyn lahaa.
Laakiin shirarkii hore ayaa inta badan waxaa hareyn jiray arimaha awood qeybsiga dalka iyo doorashada Soomaaliya, balse shirarkaan waxay yihiin kuwo ka duwan kuwii hore.
Madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya inuu ku wargeliyo madaxda maamul goboleedyada inay yareeyaan awoodaha dheeriga ee ay adeegsanayaan marka ay ku sugan yihiin dalalka kale ee caalamka ayna galin karin heshiisyo dowladda dhexe aysan la socon.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa gala heshiisyo loogu talo galay inay gasho dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ugu dambeeyay heshiiskii Imaaraatka loogu saxiixay Dekadaha Berbera iyo Boosaaso.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay madaxda maamul goboleedyada inay isla jaanqaadaan oo ay ka shaqeeyaan nabadeynta iyo horumarka Soomaaliya.